Vokatra vaovao : hamoaka ny « Izaignahary mahery » ny Manakhasy | NewsMada
Vokatra vaovao : hamoaka ny « Izaignahary mahery » ny Manakhasy
Manan-karena ny hira malagasy. Porofoin’ny tarika Manakhasy amin’ny alalan’ny vokatra vaovao « Izaignahary » izany. Rakikira voalohany ho an-dry zareo.
« Izaignahary mahery ». Io ny lohatenin’ny vokatra voalohany, ketrehin’ny tarika Manakhasy, amin’izao fotoana izao. Mametraka avy hatrany ny « soniany » izy telo mirahalahy mpikambana (Vony, Mananjara ary Andriamihaja), eo amin’ny fanandratana ny mozika nentim-paharazana malagasy.
Ahitana hira 11 ny « Izaignahary mahery », rakikira na CD. « Raha ny gadona asongadinay ao manokana no resahina, azoko hambara ny hoe avy aty Madagasikara io … mozika nentim-paharazana io, raha tsorina », hoy i Vony. Avy amin’ny lafivalon’ny Nosy ny mozika voizin’ny tarika Manakhasy. Toy izany koa ny zavamaneno lalaovin’izy ireo. « Izaho, mitendry marovany. Amponga ny an’i Mananjara ary gitara ny an’Andriamihaja, saingy samy mitendry zavamaneno malagasy maro hafa izahay », hoy hatrany i Vony.
Mifanaraka amin’izay fandalana ny maha Malagasy izay ihany koa ny hafatra tian’ny tarika hampitaina. « Tolona manokana amin’ny famerenana ny nentim-paharazana ny voarakitra ao anatin’ity rakikira ity », hoy i Vony. Eo koa ny fanentanana amin’ny fiarovana ny vakoka sy ny kolontsaina malagasy ary ny tontolo iainana.
Ankoatra ny maha mpanakanto (mpitendry zavamaneno sy mpihira) azy telo lahy mpikambanana ao amin’ny Manakhasy, samy mpanao asa tanana ihany koa izy ireo. Mampiavaka azy ireo amin’izany ny fampiasana zavatra sy kojakoja nanan-danja teo amin’ny Malagasy, toy ny vakana.